Tag: holograph | Martech Zone
Iyo Ramangwana reKushamwaridzana Kwevashandisi: Beyond Touchscreens
Chishanu, July 1, 2016 Douglas Karr
Iyi infographic kubva kuShop Smart inokurukura ramangwana revashandisi maficha kupfuura iyo yekubata skrini. Pamwe akanyanya epamberi mushandisi interface yandiri kushandisa nhasi yangu Apple Watch. Iko kusanganiswa kweakawanda-kubata, kumanikidza, mabhatani, uye dials kwakaomarara. Uye nezvigunwe zvangu zvikuru, hazviwanzo chiitiko chisina musono. Ndiri kufara nezveramangwana! Iyo Yemberi Yekudyidzana Yekudyidzana uye Yekushambadzira Shop Smart inoratidzira mamwe matekinoroji ari padanho rekushandura mushandirapamwe kudyidzana: Holographs - Microsoft